कोरोनो भाईरस प्रकरण, वुहानबाट नेपालीको उद्धार कहिले ? - Mitho Khabar
कोरोनो भाईरस प्रकरण, वुहानबाट नेपालीको उद्धार कहिले ?
February 13, 2020 mithokhabarLeaveaComment on कोरोनो भाईरस प्रकरण, वुहानबाट नेपालीको उद्धार कहिले ?
काठमाडौँ: नोवल कोरोना भइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर १० हजार नाघेको छ भने मृतकको संख्या शुक्रबार बिहानसम्ममा २१३ पुगेको छ । यस्तै यो विश्वका २० राष्ट्रमा देखिएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, चीनमा बाहेक अन्यत्र भेटिएका संक्रमितको भने मृत्यु भएको छैन ।
नेपालीको उद्धार कहिलेर ?
कोरोना संक्रमणको केन्द्र वुहानमा रहेका नेपाली भन्छन्( ‘हाम्रो उद्धार गर्नुपर्‍यो’
कुन देशमा कति संक्रमितरु
श्रीलंका – १ कान्तिपुरबाट ।
काठमाडौंको सानेपामा पूर्व सचिवकी श्रीमती रगताम्य अवस्थामा फेलाः कामदार झुण्डिएको अवस्थामा फेला
हिमालय एयरलाइन्सले मलेसिया काठमाडौं उडान तय भर्दै कैले बाट हुदै छत उडान